Mmiri | Ọkọwa Okwu Ahụike
Kedu ihe kpatara mmiri jiri bụrụ mmiri zuru ụwa ọnụ?
Achọrọ mmiri maka sel ọ bụla na ahụ yana ọrụ ọ bụla na ahụ. Mmiri jupụtara na mkpụrụ ndụ.
Ọ na-eme ka nkwonkwo anyị na-anyụ anyụ.
Na-edozi okpomọkụ anyị.
Metabolizes ma bufee nri anyị na mmiri iyi.
Na-ewepụ nsị ahụ n'ahụ.
Ọrụ dị ka ihe na - eme mkpọtụ maka ụbụrụ, nwa ebu n’afọ, n’ọkpụkpụ azụ.
Ckwụ Cramps Remedy - Tozọ A Ga-esi Na-emeso ramkwụ Na Legkwụ
Ckwụ Cramps Remedy - Tozọ A Ga-esi Na-emeso ramkwụ Na Legkwụ.
Ramkwụ na ụkwụ nwere ike ime n'enweghị ihe pụtara ìhè ma ọ bụ dịka ihe mgbaàmà ma ọ bụ nsogbu nke ọnọdụ ahụike.
Ndị mmadụ na-ejikọ ọnụ ụkwụ ya na okwu a bụ "charley-horse", nke bụ ihe na-egbu mgbu na -eche ike na nrụgide n'uru nke ụkwụ. Enwere ụzọ ihe atọ dị mkpa ebe enwere nkụda mmụọ. Ndia bu umu ehi, ukwu na ukwu. Nokwụ n'ụkwụ nke ehihie bụ ụfụ nke na - eme n'abalị, na - esogbu ụra nkịtị.
Nri - Nlere Eke & Ndụmọdụ Kacha Mma
Clifford Nwere ike 26, 2019
Nri. “O nweghị onye taa ga-eri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri zuru ezu iji nye ya nnu na mmiri ọ chọrọ maka ahụike zuru oke.”